Sein Lyan - စိ န် လျှံ: သတိရစရာတွေထဲက
Writer Sein Lyan Time 7:47 pm
အဲလို စိတ်မကောင်းစရာတွေ မရေးပါနဲ့လို့
ကိုဖိုးစိန် စိတ်ချမ်းသာရင် ကျနော်တို့ ပျော်ပါတယ်ဗျ..
လူလဲ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မှန်း မသိတော့ပါဘူး။
စိန်မျောက်မျောက်၊ စိန်ကောက်ကောက်.. စိန်ငချွဲ...
စိန်ချွန်တွန်း..... စပ်စုစိန်၊ ပျာကလပ်စိန်...
ပြည်သူ့မေတ္တာခံယူချင်တဲ့ ဇာတ်မင်းသား ဖိုးးစိန်........
၀ါးးးးးးးးး ........ လို့တောင် အော်ငိုဖို့ အားမရှိအောင် ၀မ်းသာ (အဲလေ) ၀မ်းနည်းရပါတယ်။
ပြန်ပါအုံးကွယ်..ပြန်အုံးကွယ်.. နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် လို့.....
ဒီ မောင်နှမတွေ ဘယ်နှလုံးသားနဲ့များ နှုတ်ဆက်နိုင်အားကြမှာလဲကွာ....
ခုတောင် ကိုယ်တွေလက်တွေ ကိုက်ခဲနာကျင်လို့ ဆေးခွင့်ယူရတဲ့သူနဲ့၊ အလုပ်ပြောင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေကြရတဲ့သူနဲ့ နေလောင်ပီး အသားတွေမဲကုန်လို့ အပြင်မထွက်ရဲရတော့တဲ့သူနဲ့ ဖြစ်ကုန်ကြဘီ ဆိုတော့ကာ.......။ ကြာကြာဆက်နေရင်တော့.. အင်းးးးးးးးးး............ (ပိုပြီး ပျော်ကြရမယ်........ ပြောချင်တာပါ)
ဘာပဲပြောပြော.. တို့တွေ အားလုံး ပျော်ခဲ့ကြ၊ ပျော်နေကြပါတယ်။
အဲဒီအပျော်၊ သံယောဇဉ် နဲ့ ခင်မင်မှုတွေ မေတ္တာတွေ...
ထာဝရ တည်မြဲနိုင်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်လျက်....
စာမရေးဖြစ်လို့ ဘလော့သိပ်ခါ မကျပါဘူး..
ကျတယ်လို့ ယူဆသူတွေကလည်း ယူဆ နိုင်ပါတယ်..
အမှန်တကယ်တော့ ကိုဖိုးစိန်ရောက်နေလို့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့တွေ ငြိမ်နေကြတာပါ.
ခုလို ခွင့်ရက်မှာ အမိမြေကိုမပြန်ပဲ ကျွန်တော်တို့ဆီ လာလည်တာ အင်မတန်ကို သံယောဇဉ်ရှိလို့ဆိုတာ ညင်းမရပါဘူး..
ကျွန်တော်သာဆိုရင် ကိုဖိုးစိန်လို လုပ်နိုင်ပါ့မလား... ဆုံးဖြတ်ရ အတော်ကို ခက်မယ်..
ဘာပြောပြော ဝမ်းနည်းစရာတွေကို ချန်မထားပါနဲ့...
29 December 2009 at 20:44
ဖြစ်မှာ သေချာတယ် ..
ကိုဖိုးစိန် လာမယ့် လ အိမ်လခ မပေးတော့ဘူးးး ...
est coast (ဒါမှမဟုတ်)
တစ်နေရာရာက ကမ်းခြေ မှာပဲ
အိပ်လိုက် ၊ စားလိုက် ၊
အလုပ်သွားလိုက် ၊ ပြန်လာလိုက်
အိမ်လခ တစ်လ စာ သက်သာလည်း
နည်းတာ မဟုတ်ဘူးးးး ...
ဒီအဖွဲ့ ကြီး လာလည် မယ်နော် ...
ဘယ်တွေ သွားရမလဲ ဆိုတာ
စဉ်းစား ထားးးးးးးး ..... !
30 December 2009 at 02:57
ဘလောက်(ဂ်)ဂါတွေလဲပျော်.....စာဖတ်သူတွေလဲပျော်.. စလုံးတွေလဲပျော်.... ပျော်ပျော်ပျော်.....
30 December 2009 at 03:10
ကိုဖိုးစိန်ပြန်သွားရင်လည်း ဒီကလူတွေ ကိုဖိုးစိန်အကြောင်းပြောရင်း တသသ ဖြစ်နေမှာ...
30 December 2009 at 03:13
အင်း..... ဒီလိုပါပဲ။ ဆုံတွေ့ခြင်းဟာ ခွဲခွာဖို့ပဲ မဟုတ်လား။ အဲလိုသာဆိုရင် ခွဲခွာခြင်းဟာလည်း ပြန်ဆုံတွေ့ကြဖို့အတွက်ပဲ လို့ထင်ပါတယ်။ ခုလိုဆုံဆည်းနေရချိန်လေးမှာ ဝမ်းနည်းစရာတွေ ဘာလို့တွေးနေမှာလဲ။ ပျော်တပြုံးပြုံး မို့သို့ချုန်းနေစမ်းပါ။
အမကတော့ ဖိုးစိန် တို့နဲ့တွေ့ဖို့
ဒီလိုမှန်းသိရင် east coast လာပါတယ်။ ပျော်ချင်လို့။ ဒါပေမယ့် ပူးတေက ဒီနှစ်အတွက် MC လဲကုန်ပီ။ leave တွေကလဲ မင်္ဂလာဆောင်ပြန်ဖို့ယူထားတာ နောက် ၂ နှစ်စာအထိ ကုန်နေပီ.... leave တွေ အကြွေးတင်နေတယ်။ ဒါကြောင့် :(
ဒါနဲ့ ကိုဖိုးစိန်ကြီး ဘယ်နေ့ပြန်မှာလဲ။ အလှူဖိတ်မလို့နော်... သူတို့လိုမေးတာမဟုတ်ဘူးနော်.. :)
ဒီမယ်ဘုန်းဘုန်း... ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ... တောင်းဆိုတာက အပျော်ရေးပါလို့ မနေ့ က တောင်းဆိုတာ... အခုတော့... ဟွင်းးးး
အဟီးးး Blog မှာစာမရေးတာလဲ အကြောင်းရှိတယ်လေ... ကိုယ့်အကြောင်း၊ သူ့ အကြောင်းတွေ သိနေမှာတော့.. ပြီးတော့ အပတ်တိုင်း၊ နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်းတွေ့ နေမှတော့ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်း အချင်းချင်းပြောလိုက်ရုံမို့ ပါ.... ခွိ......
ပြီးတော့ ကော်မန့် လဲ LIVE မန့် တယ်လေ... ကိုဖိုးစိန်ပြောပြလိုက်လေ..... မသိသေးတဲ့သူတွေကို =D
အလုပ်ရရင်တော့ အဲလို ၀ိုင်းပြီး အလို လိုက်ချင်မှ လိုက်တော့မှာ :P
မပြန်နဲ့ဦး...........မပြန်နဲ့ဦးကွယ်.... နေပါဦးလို့...မပြောတောင်မှ နားလည်ပါ...။
30 December 2009 at 05:39
ပို့စ်လေးရေး ချွဲပြီး ခွေခေါက်နေလိုက်တာများးး....
အိပ်မက်ထဲမှာတောင် ပြုံးပြုံးကြီး ငိုနေတာ.....
(ချစ်လို့ ဖဲ့သည်။ အမှန်အကန်ပြောသည်)
ဖိုးစိန် ဘယ်တော့ပြန်မှာလဲ...၀ါး...! (ငိုတာနော်...)
ကိုဖိုးစိန်ကတော့ လုပ်ပြီဗျာ...မပြောနဲ့ ငိုချင်လာပြီ...
ကျွန်တော်လည်း အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်နေတာပါ...
ပတ်ဝန်းကျင် အပေါင်းအသင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ပျောက်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ...
ခုလို မမြင်ဘူးကြပေမယ့် တကယ်လည်းတွေ့ကော မောင်နှမ အရင်းအချာတွေကို ဆက်ဆံပေးကြတာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကုသိုလ်ထူးတခုပေါ့ဗျာ...
East Coast မှာ ကိုဖိုးစိန် နမူနာပုံစံလုပ်ပြသလို လိုက်လုပ်ခဲ့တာလည်း မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးဗျို့..အဟားဟား...
မပြန်သေးဘူးလား အားးးးးးးးး အဲ့လောက်ထိ နေဦးမှာလားးးးးးး ဒုက္ခပါပဲ အလုပ်တော့ ပြုတ်တော့မယ် ဝေးးးးးးးးးးး ပြန်မယ် ဟုတ်လားးးးးးးးးးး အခုလားးးးးးးးးးးးး ဝေးးးးးးးးးးးးး မဟုတ်ဘူးလားးးးးးးးးးးးးးးးးး ဝေးးးးးးးးးးးးးး ဟုတ်လိုက်ပါ
အားလုံးအတွက် အမှတ်တရလေးတွေပါ။ ပျော်ရွှင်မူတွေ ကျန်ခဲ့ပါစေ
East Coast က ပိုး မသေသေးတာ
ပျော်စရာရှိတုန်း ပျော်ထား လူ့ဘ၀ကတိုတယ်
လွမ်းရင် ဗီဗီ ရိုက်ပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ အကြီးကြီးကို ကြည့်နော် :)
ညခင်းမှာ လနှစ်စင်းဆိုလားပဲ။ :)
ကိုကိုစိန်ရေ လွမ်းစရာကို ပျော်စရာနဲ့ဖြေရတယ်ဗျနော် ..... :)